ရှင်းလင်းကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း - Course 4, Lesson 7
How To Gain A Clear Conscience?, Practical Christian Living Course IV, Lesson 7
အဓိကကျမ်းပုဒ် ။ ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားပြီ။ လူတို့ကိုပြစ်မှားပြီဟု ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်၌ အပြစ်တင်ခွင့်နှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်မည် အကြောင်း အကျွန်ုပ်သည် ကြိုးစားအားထုတ်ပါ၏။ တမန် ၂၄း၁၆
သင်သည် အမှားတစ်ခုခုကို လုပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြောသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ သင့်အတွင်း၌ သင့်ကို မသက် မသာ ဖြစ်စေသော စိတ်ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားခဲ့သည်ကို သတိထားမိပါရဲ့လား? ဤအခြင်းအရာမှာ သင်၏သြတ္တပ္ပစိတ် က သင့်ကို စကားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ သြတ္တပ္ပစိတ်က သင်မှားယွင်း နေကြောင်းကို ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရာသခင်နှင့် ၀မ်းမြောက်စွာ မိတ်သဟာယဖွဲ့နိုင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ် ရှိရမည်။
ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ဆိုသည်မှာ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဖြစ်စေ၊ လူတို့နှင့်ဖြစ်စေ သင့်မြတ်လျှက် ရှိကြောင်းကို သိခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သင့်အတွင်းပိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်၏ လွတ်မြောက်မှုဖြစ်သည်။ တမန်တော် ပေါ်လုက ““ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားပြီ။ လူတို့ကို ပြစ်မှားပြီဟု ကိုယ်စိတ်နှလုံးသည် ကိုယ်၌အပြစ်တင်ခွင့် နှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်သည် ကြိုးစားအားထုတ် ပါ၏။”” တမန် ၂၄း၁၆
ဤကျမ်းပုဒ်က ရှင်းလင်းကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်တွင် အသွင်အပြင် (၂)ခုရှိကြောင်းကိုပြသည်။
(၁) ဘုရားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ အသွင်အပြင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဘုရားသခင်၏ကြားတွင် ဘာမှ ကာဆီးထားခြင်းမရှိ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် သိရှိခံစားရမည်။
(၂) လူနှင့်ပတ်သက်၍ အသွင်အပြင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပေါင်းအသင်းလူများနှင့် သင့်မြတ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားလူများနှင့် သင့်မြတ် အောင်လုပ်ထားရမည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ထားမှသာ မည်သူတဦးတယောက်ကမျှ ကျွန်ုပ်တို့ကို လက်ညှိုးထိုး၍ ““သင် ငါ့အပေါ်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သော်လည်း သင့်အပြစ်ကိုလွှတ်ပေးဖို့၊ တpfခါမှ မတောင်းဆိုသလို ကျွန်ုပ်နှင့်သင့်မြတ် အောင် လုပ်ဖို့လည်း မကြိုးစားခဲ့ဘူး””ဟူ၍ ပြောနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာ၌ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အစစ်အမှန်ဖြစ်လာစေရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လုပ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်ရမည်ဆိုတာကို လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်း စာ၌ ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်အောင် မပြုလုပ်မီ၊ လူများနှင့်သင့်မြတ်အောင် အရင်ပြုလုပ်ရမည်ကို ကြည့်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကြီးမြတ်သောသူတော်စင်တpfပါးက ဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည်။ ““ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် သင်သည် မသင့်မြတ်ပါက ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။””
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ဤကျမ်းသည် လက်တွေ့ဘ၀ အခြေအနေများကို ဖော်ပြထားပြီး ထိုအခြေအနေများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘုရားသခင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၀တ်ပြုရာကျမ်းအခန်းကြီးတွင် ဘုရားသခင်က ““ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်”” အကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။ ဤနေရာတွင် ဒုစရိုက် (trespass) ဆိုသော စကားလုံးသည် အခြားသူ တစ်ဦး၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခြင်း(သို့) သူ့ကိုမတရား ဆက်ဆံခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးကအခြားလူတစ်ဦးအပေါ်သို့ ကျူးလွန်ခဲ့သော ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ဖြေရန် အတွက် ဘုရားသခင်ကို ပူဇော်ပေးရသောအထူးယဇ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့သူ့အပေါ်တွင် ကျူးလွန် သောအပြစ် ကိုသာမက ကျွန်ုပ်တို့အခြားသူများအပေါ်တွင် ကျူးလွန်သော အပြစ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်း စိုးရိမ်မှုရှိသည်။ ၀တ်ပြုရာကျမ်း ၆ တွင်
၀တ်ပြုရာကျမ်း ၆တွင် ကျမ်းစာက အကြောင်းအရာအချို့ကို တိတိကျကျဖော်ပြထားသည်။
(၁) သူတပါးတို့က သင့်ထံအပ်နှံထားသောအရာများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် နမော်နမဲ့နိုင်ခြင်း
(၂) စီးပွားရေးလုပ်ရာတွင် ရိုးသားမှုမရှိခြင်း
(၄) အခြားလူတစ်ဦးကို ညာစားခြင်း
(၅) ကောက်ရသောပစ္စည်းများကို ပိုင်ရှင်အစစ်ထံပြန်ပေးရမည့်အစား ကြားဖြတ်ယူထားခြင်း
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးသည် တစ်ခုခုကိုခိုးဝှက်သည်ဖြစ်စေ၊ သူ့ထံအပ်ထားသောတစ်စုံတစ်ခု ပျောက်ရှသည်ဖြစ်စေ သူများထံမှ ညာစားသည် ဖြစ်စေ၊ ထိုသူသည် တန်ဖိုးအပြည့်အ၀ကို ပြန်လည်ပေးချေရမည် သာမက အပြစ်ဒဏ် အနေဖြင့် နောက်ထပ် ၂၀%ကိုလည်း ထပ်လောင်းပေးရမည်ဟု ဘုရားသခင်ကပြော ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ခိုးဝှက်ခြင်းအားဖြင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လူတစ်ဦးသည် သူ၏အပေါင်းအသင်း လူတစ်ဦးနှင့် သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှသာ သူ၏ဒုစရိုက်ဖြေရာယဇ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ယူဆောင်လာခွင့် ရပြီး ဘုရားသခင်၏အပြစ်လွှတ်ပေးခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲရှိ ဤျကျမ်းပုဒ်များအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်အရေးကြီးသော အမှန်တရား (၂)ခုကို သင်ယူသိရှိကြသည်။
(၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖေါ်အဖက်ဖြစ်သူတဦးအပေါ်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်သည့်အခါ၊ ဘုရားသခင် အပေါ်တွင်လည်း ကျူးလွန်သည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်သင့်မြတ်အောင်မလုပ်မီ လူများနှင့်သင့်မြတ်အောင် အရင် ပြုလုပ်ရမည်။
ဘုရားသခင်နှင့် မသင့်မြတ်နိုင်မီ လူများနှင့် သင့်မြတ်အောင်အရင်လုပ်ရမည် ဟူသော သမ္မာတရားကို ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ လည်း သင်ကြားထားသည်။ သခင်ယေရှုက ““ထို့ကြောင့်သင်သည် ပူဇော်သက္ကာကို ယဇ်ပလ္လင်သို့ဆောင်ယူခဲ့လျှက် သင်၏ညီအစ်ကိုသည် သင်၌ အပြစ်တင်ခွင့် တစ်စုံတစ်ခု ရှိသည်ဟု အောက်မေ့သတိရလျှင် ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ပူဇော် သက္ကာကိုထား၍သွားလော့။ ညီအစ်ကိုနှင့်သင့်တင့်ပြီးမှ ပြန်၍ပူဇော် သက္ကာကို တင်လော့။””ဟု ဆိုခဲ့သည်။ မဿဲ ၅း၂၃-၂၄
ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ကိုလာရောက် ကိုးကွယ်သည့်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကို ပြောပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရုတ်တရက် ထိုသူသည် အခြားသူတစ်ဦးအပေါ်တွင်သူ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို သတိရသွားသည်။ သူ သည် ယဇ်ပလ္လင်ရှေ့မှာ ပူဇော်သက္ကာကိုထားခဲ့ပြီး ပထမဆုံး သူ့ညီအစ်ကိုထံသို့သွား၍ ညီအစ်ကိုနှင့် သင့်မြတ်ပြီးမှသာ ပြန်လာ၍ဘုရားသခင်ထံ သူ၏ပူဇော်သက္ကာကို ပူဇော်ရမည်ဟု သခင်က ပြောထားသည်။
သူ့ညီအစ်ကိုနှင့် ““ပြန်လည်သင့်မြတ်သည်”” ဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း? တောင်းပန်စကား ဆိုခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပြန်လျော်ပေးခြင်း အားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ထိုသူနှင့်သင့်မြတ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သင်သည် သင့်ညီအစ်ကိုနှင့် ပထမဆုံးသင့်မြတ်အောင်မလုပ်ပါက သီဆိုခြင်း၊ ပေးလှူခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများ အားဖြင့်လည်း ဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်အောင် ဘုရားသခင်အား ၀တ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဤနေရာတွင် သခင်ယေရှုက စည်းမျဉ်းတစ်ခုကို ချမှတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရ သော စည်းမျဉ်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းမှာ ““ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မသင့်မြတ်မီ လူများနှင့် သင့်မြတ်အောင် အရင်လုပ်ရမည်””ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
အပြစ်တိုင်းအတွက် အခြားသူတစ်ဦးနှင့် သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်အပေါ်တွင်သာ အပြစ်ကျူးလွန်ပါက အပြစ်ဝန်ခံခြင်းကို ဘုရားသခင်ထံသာ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော် အခြားသူတစ်ဦးအပေါ်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါက ထိုသူတို့ နှင့် သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာက ဒါဝိဒ်သည် ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့် တွေ့သူဟုပြောထားသည်။ ဤသို့စိတ်တော်နှင့် တွေ့သည့် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်အပေါ်တွင်ထားရှိသော ဒါဝိဒ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဘုရားသခင်နှင့် လုံးဝ သင့်မြတ်လိုသည့် သူ၏စိတ်ဆန္ဒတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သည် သူဘ၀တွင်ရှိနိုင်သည့် မည်သည့်အပြစ်ကိုမဆို ထောက်ပြရန် ဘုရားသခင်အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူက ““အိုထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ စိတ်နှလုံးကို ရှာဖွေတော် မူပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုစမ်းသပ်၍ ကျွန်ုပ်၏အကြံအစည်တို့ကို သိရှိတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်အတွင်း၌ ကောက်ကျစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ရှိမရှိကို စစ်ဆေးတော်မူပါ။”” ဟူ၍ ဆုထောင်းခဲ့သည်။ ဆာ၊ ၁၃၉း၂၃-၂၄
ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်းလင်းကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ကို ရရှိလိုပါက၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးတို့ကို ရှာဖွေခွင့်ပြု၍ အခြားသူများ အပေါ်တွင် ကျူးလွန်ထားသည့်အပြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖေါ်ပြ ပေးရန် ခွင့်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။
(၁) သင်ပြောသော၊ လုပ်သောအရာတစ်ခုအားဖြင့် အခြားသူတစ်ဦးနာကျင်စေ၊ ကသိကအောက်ဖြစ်စေခဲ့ သလော?
(၂) သင့်အလုပ်ရှင် မိသားစုနှင့်အခြားသူများထံမှ ခိုးဝှက်ဖူးသလော။?
(၃) တစ်စုံတစ်ဦးကို လိမ်ညာပြီး ခွင့်လွှတ်ပေးရန် သူထံသို့ သွားတောင်းဆိုဖူးသလော?
(၄) တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်တွင် ခါးသောစိတ်နှင့် နားကြည်းမှုရှိခဲ့ဖူးသလော?
(၅) တစ်စုံတစ်ဦး၏အပြစ်ကို လွှတ်မပေးလိုသောစိတ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးသလော?
(၆) သင့်အပေါ်တွင် အာဏာရှိသူတစ်ဦးကို ပုန်ကန်ခဲ့ဖူးသလော?
(၇) သင့်ကို ကူညီခဲ့သူများကို ကျေးဇူးတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ဖူးသလော?
(၈) အခြားအပြစ်များကိုလည်း ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးသလော?
ပြီးခဲ့သည်သင်ခန်းစာ၌ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဘုရားသခင်၏ကြားထဲတွင်ရှိသော အပြစ်များကိုမည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည် ကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ယခုတွင် အခြားလူများအပေါ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ် များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရမည်ကို လေ့လာကြမည်။ ““ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် သင်သည် မသင့်မြတ်ပါက ဘုရားသခင်နှင့်သင့်မြတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ”” ဟူသောအချက်ကို သတိရပါ။
ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကို စဉ်းစားကြည့် ကြပါစို့။
(၁) သင့်အပြစ်ကိုလွှတ်ပေးရန် သင်တောင်းဆိုရမည့်လူများစာရင်းကို ချရေးပါ။
သင့်အပြစ်ကိုလွှတ်ပေးရန် သင်တောင်းဆိုရမည့်လူများစာရင်းကို စတင်ရေးပါ။ သူတို့အပေါ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များကိုလည်း ချရေး ပါ။ အပြစ်အချို့သည် သင့်စိတ်ထဲသို့ချက်ချင်းဝင်ရောက် လာမည်ဖြစ်သော်လည်း အချို့ ကျူးလွန်မှုအပြစ်များကိုမူ အချိန်ယူစဉ်းစားရပေမည်။ အလျင်စလို မပြုလုပ် ပါနှင့်။ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အလုပ် လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တွေးလို့ရသမျှ ကျူးလွန်မှုအပြစ်များ ကိုချရေးပါ။
သင်တွေးလို့ရသမျှ အပြစ်ကျူးလွန်မှုများကို ချရေးပြီးနောက်၊ သင်ချရေးရန်မေ့လျော့ခဲ့သည့် အပြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အားသတိပေးရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို တောင်းဆိုပါ။ သူ့ထံ ဤသို့ ဆုတောင်းပါ။ ““ကောင်းချီးချပေးသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ် မှားယွင်းစွာပြုမူ ဆက်ဆံခဲ့သော လူအားလုံးနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်လိုပါ၏။ အခြားလူတစ်ဦးအပေါ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များအားလုံးကို မှတ်မိ သတိရစေရန်အတွက် ကူညီတော်မူပါ။””
အကယ်၍ သင်သည် ဤသို့ရိုးသားဖြောင့်မှန်စွာဆုတောင်းပါက သင်တွေး၍မရသော အပြစ်ကျူး လွန်မှုများကို ၀ိညာဉ်တော်ကပြသလိမ့်မည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွင် အလွန့်အလွန်ကောင်းသော မှတ်ဥာဏ်ရှိသည်ကိုလည်း သင်သိလာလိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာက သင်ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များကိုပင် သူသတိရစေလိမ့်မည်။ နှစ်ပေါင်းမည်မျှအကြာက ကျူးလွန် ခဲ့သည့်အပြစ်ဖြစ်စေ၊ ထိုအပြစ်ကို သင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်။ ထိုအပြစ်ကို မကိုင်တွယ်ပါက၊ ထိုအပြစ်သည် အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး သင်နှင့်အတူရှိနေလိမ့်မည်။
သင့်စာရင်းကို ချရေးပြီးနောက် ဂရုတစိုက်ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ အရေးကြီးမှုအပေါ်တွင်မူတည်၍ ၁၊၂၊၃ အစရှိသဖြင့် အစဉ်အတိုင်းချရေးပါ။ မည်သည့်အပြစ်များက အရေးကြီးသည်ကို ပြသပေးရန် အတွက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
(၂) တောင်းပန်ရန်အတွက် လျော်ကန်သောအချိန်နှင့် နည်းလမ်းကိုရွေးပါ။
သခင်က သင်သည် တစ်စုံတစ်ဦးထံသို့သွား၍ တောင်းပန်သင့်သည်ဟု ဖေါ်ပြသည်နှင့်တပြိုင်နက် ချက်ချင်းသွား၍ တောင်းပန်ပါ။ သူ့အတွက် အဆင်ပြေမည့်အချိန်နှင့် သူနှင့်နှစ်ယောက်တည်းစကား ပြောနိုင်မည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့အလုပ်ရှုပ်နေသည့်အတွက် သင်နှင့်စကားပြောရန် အချိန် မရှိသည့် အခါမျိုးတွင် သူတို့နှင့်သင်မတွေ့ချင်မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့ထံသို့ ချက်ချင်း သွားရောက်နိုင်ခြင်းကို မည်သည့် အရာကမှ မတားဆီး ပါစေနှင့်။
တောင်းပန်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးအရသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူထံသို့ တိုက်ရိုက်သွား၍ နှစ်ယောက် တည်း စကားပြောပါ။ ဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုပြောဆိုခြင်းသည် ဒုတိယ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများ၊ အထူးသဖြင့် ပုဂ်္ဂိုလ်ရေးအရ လည်ပတ်ခြင်းသည် ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို မပေးနိုင်ပါက ဖုန်းခေါ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဟု ပြောနိုင်သည်။
သင့်ကိုအပြစ်လွှတ်ပေးရန်အတွက် ရေးထားသောစာတစ်စောင်ကို ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့သော် ဤ နည်းလမ်းသည် အလည်အပတ်သွားခြင်းနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့လောက် နှစ်ခြိုက်စရာမကောင်းပါ။ ပထမအချက်အနေဖြင့် ထိုသူသည် သင့်စာကို ပြန်ချင်မှပြန်မည်ဖြစ်သောကြောင့် သူခွင့်လွှတ်လား၊ မလွှတ်လား ဆိုတာကို သင်မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အချိန်မဆွဲပဲ သင်သည် မှန်ကန်စွာ တောင်းပန်ကြောင်း ကို သေချာစေပါ။
သင်ကျူးလွန်ထားသောအပြစ်များသည် မည်မျှများသလဲအပေါ်တွင်မူတည်၍ သင်သည် တောင်းပန်မှုကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်လုပ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဘုရားသခင်အပေါ်တွင်သာ အပြစ်ကျူး လွန်ထားပါက ဘုရားသခင် နှင့် ထိုလူတို့ကိုသာ တောင်းပန်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည် လူများစွာအပေါ် တွင်အပြစ်ကျူးလွန်ထားပါက ဘုရား သခင်နှင့် ထိုလူများစွာတို့ကို ၀န်ချတောင်းပန်ရမည်။ သင်၏အပြစ် ကျူးလွန်မှုသည် အသင်းတော် တစ်ခုလုံး အပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုရှိပါက၊ အသင်းတစ်ခုလုံးနှင့် ဘုရားသခင်ကို ၀န်ချတောင်းပန်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို တောင်းပန်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို လုံးလုံးလျားလျားဝန်ခံ၍ အပြစ်လွှတ် ပေးရန် နှိမ့်ချစွာ တောင်းဆို ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့မလုပ်ပါက ကျူးလွန်ထားသောအပြစ်ကို ကွယ်ပျောက်စေလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ လူတစ်ဦးသည် ကြိမ်ဖန်များစွာ တောင်းပန်သော်လည်း မှားယွင်းသော နည်းလမ်းအားဖြင့် တောင်းပန်ပါက သူ၏လွန်ကျူးမှုအပြစ်ကို ချေဖျက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤသို့ပြောခြင်းသည် မှားယွင်းသည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် သင်၏ကျူးလွန်မှုအပြစ်အတွက် တာဝန်ကို လုံးလုံး လျားလျား မယူသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
““အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အမှားပြုလုပ်ခဲ့ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ခွင့်လွှတ်ပါ””
သင့်တောင်ပန်စကား၏အစတွင် ““အကယ်၍”” ဟုသုံးထားခြင်းအားဖြင့် သင်ဆိုလိုသည်မှာ ““ကျွန်ုပ် မှားခဲ့လား၊ မမှားခဲ့လားဆိုတာကို ကျွန်ုပ်သေချာမသိဘူး?ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤအရာမှာ စစ်မှန်သော တောင်းပန်မှုမျိုး မဟုတ်ပါ။
““ဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။“
ဤသို့သော တောင်းပန်မှုသည် မမှန်ကန်ပါ။ အကြောင်းမှာ မှားယွင်းတာကို ၀န်မခံသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဤသို့သောမပြည့်မစုံ တောင်းပန်မှုမျိုးသည် မမှန်ကန်ပါ။ အကြောင်းမှာ သင်ကျူးလွန်ထားသော အပြစ်ကို တိတိကျကျမဖော်ပြထားသလို သင်၏မှားယွင်းစွာလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်း ၀န်မခံသောကြောင့်ဖြစ် သည်။
““ကျွန်ုပ်ဒေါသတကြီးဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ထိုသို့ဖြစ်အောင် သင်လုပ်ခဲ့တာပဲ””
ဤအရာသည် မှားယွင်းသည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် သင်မှားယွင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုအတွက် တာဝန်မယူရုံ သာမက အခြားလူအပေါ်၌ပင် အပြစ်ပုံချနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တောင်းပန်ရာတွင် မှားယွင်းသောပုံစံများအကြောင်းကို ဥပမာများစွာပေး၍ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် မည်သို့သော မှန်ကန်သော ပုံစံမျိုးဖြင့် တောင်းပန်ရမည်နည်း?မှန်ကန်စွာ တောင်းပန်နိုင် ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ....
(၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ကျူးလွန်မှုအပြစ်များအတွက် တာဝန်အပြည့်အ၀ ယူသင့်သည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျူးလွန်မှုအပြစ်ကို နံမည်တပ်၍ ပြောပါ။
(၃) ကျွန်ုပ်အားအပြစ်လွှတ်ပေးရန် ထိုလူကို တောင်းဆိုပြီး သူ့ထံမှအဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းပါ။
မှန်ကန်သော ပုံစံမျိုးဖြင့် မည်သို့တောင်းပန်ရမည်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဥပမာပေး၍ ဖော်ပြထား သည်။
““ဤ(မည်သို့သော ကျူးလွန်မှုအပြစ်ဖြစ်သည်ကို နံမည်တပ်၍ပြောပါ)သည်ကို လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ပေါ်တွင်အမှား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်မည်လော?
အခြေအနေက မည်သို့ပင်ဖြစ်နေပါစေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တောင်းပန်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လုပ်ထားသော အမှားအတွက် တာဝန် အပြည့်အ၀ ယူရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သာမှား၍ အခြားလူက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း မှားသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ရိုးသားစွာ ခံစားရနိုင် သော်လည်း ဤသို့ခံစားရခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်မှ ရုန်းထွက်နိုင်ရန်အတွက် အကြောင်းပြချက် မဖြစ်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ လုပ်ထားသောအမှားများအတွက် တောင်းပန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိသည်။ ထိုသူဘက်မှ အမှားအတွက်ကိုမူ ဘုရားသခင်အား ကိုင်တွယ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။
တောင်းပန်သောအခါတွင် တတ်နိုင်သမျှ တိုတိုရှင်းရှင်းပင် တောင်းပန်သင့်ပြီး အသေးစိတ်အချက် အလက်များကို ပြောပြခြင်းမှ ရှောင်ရှား သင့်သည်။ လုံးဝဥဿုံလိုအပ်မှုမရှိဘဲ၊ အခြားလူများကို ဤကိစ္စထဲသို့ ၀င်မပါပါစေနှင့်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မယုံကြည်သူတစ်ဦးကို တောင်းပန် နေပါက၊ တချိန်တည်း၌ပင် ခရစ်တော်အကြောင်းကို သူ့အားသက်သေမခံသင့်ပေ။ ဤအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ခံခြင်းနှင့် တောင်းပန်ခြင်းအားဖြင့် သက်သေခံခြင်းသည် လုံလောက်မှုရှိသည်။
အခြားသူသည် သင်၏တောင်းပန်မှုကို လက်မခံ၍ သင့်ကိုခွင့်မလွှတ်ပေးကြောင်းကို ပြောလာနိုင်သည်။ ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် သင့်မြတ်မှုရရှိစေရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာများကို ရိုးသားစွာနှင့် နှိမ့်ချစွာလုပ်ဆောင် ပြီးစီးပါက၊ ကျန်သည့်ကိစ္စကို ဘုရားသခင်ထံ လွှဲအပ်လိုက်ပါ။
(၄) လျော်ကန်သောအဖိုးအခကို ပြန်လည်ပေးလျော်ပါ။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်စုံတစ်ဦးအား နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေခဲ့ပါက ပြန်လျော်ပေးရမည်။ “ပြန်လျော်ပေးရမည်” ဟူသောစကားစု၏ အဓိပ္ပါယ်မှာအဘယ်နည်း? အဓိပ္ပါယ်မှာ သင် ဆုံးရှုံးနစ်နာစေခဲ့သောသူ၏ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကို ပြန်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသူနှင့် သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ထိုသို့မလုပ်ပါက ဘုရားသခင်ထံသို့ ရှင်းလင်း ကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့် တိုးဝင်ချဉ်ကပ်ရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် အခြားသူတစ်ဦးထံမှ တစ်စုံတစ်ခုကို ခိုးယူသည်ဆိုကြပါစို့။ ဤသို့ ပြောရုံလေးဖြင့် မလုံ လောက်ပါ။ ““သင့်ဆီက ခိုးယူခဲ့သည့်အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။”” ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်လွှတ်ပေးရန်အတွက် တောင်းဆိုသင့်သည်။ သို့သော် ထိုသူ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုအတွက် ပြန်လျော် ပေးရမည် (သို့) ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းကို အစားပြန်လျော်ပေးရမည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်စုံတစ်ဦးကို နစ်နာဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါက သင့်လျော်သောအဖိုးအခကို ပြန်လျော်ပေးရမည်။
ငွေကိုအသုံးပြု၍ အလျော်ပေးရသောကိစ္စမျိုးတွင် သင်သည် ငွေကိုချက်ချင်းပြန်မပေးနိုင်မည်မှာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် မည်။ ဤသို့သောကိစ္စမျိုးတွင် မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် ငွေကိုပြန်လျော်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်မှုများကို ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကြွေးများကြေသွားသည်အထိ သတ်မှတ်ထားသော ငွေပမာဏကိုလည်း ပေးချေနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်မှုများပြုလုပ် ထားရန် လိုအပ်ပေမည်။ ကတိပေးထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်၍ သစ္စာရှိကြောင်းကို သေချာစေပါ။
(၅) ဆင်ခြေများပေးခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မာန်မာနကိုထိခိုက်စေသောအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်လိုကြပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့် တောင်းပန်ရန်နှင့် အပြစ်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရန် အခြားသူတစ်ဦးထံသို့ သွားရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဆင်ခြေများ ပေးခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်တော်ကြသည်။ အောက်ပါတို့ မှ ပေးလေ့ပေးထရှိ သော ဆင်ခြေအချို့ဖြစ်သည်။
“ကျွန်ုပ်၏ကျူးလွန်မှုအပြစ်ကိုကာမိစေရန်အတွက် ထိုသူအတွက် ထူခြားကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကို ပြုလုပ် ပေးမည်။”
ဤသို့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင်ကျူးလွန်မှု့အပြစ်ကို ချေဖျက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယောက်ျား တစ်ဦးသည် သူပြောသော အရာ တစ်စုံတစ်ခုအား ဖြင့် သူ့မိန်းမကိုစော်ကားပြီးနောက် ပန်းစည်းတစ်စည်း(သို့) သကြားလုံးတစ်ထုပ်ကို သူ့မိန်းမထံ ယူဆောင်လာခြင်းအားဖြင့် သူ၏ကျူးလွန်စော်ကားခဲ့မှုကို မချေဖျက် နိုင်ပါ။ ““လျော်ကန်သောတောင်းပန်မှု”” ဟူသော ကျူးလွန်မှုအပြစ်ကို ချေဖျက်နိုင်သောအရာ တစ်ခုတည်း သာရှိသည်။
အမှု့ကိစ္စများကို လုပ်ဆောင်ရန်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းသည် ရှင်းလင်းကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်၏ အကြီးမားဆုံး ရန်သူတော် များထဲမှ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက ““သင့်ရန်သူတော်များနှင့် သဘောတူညီမှု့ရရန် အလျင်အမြန်ပြုလုပ်ပါ။”” ဟု ပြောခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ““သင်လုပ်စရာ ရှိတာကို၊ ယခုပင် လုပ်ပါ”” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဤအချက်သည် မှန်ချင်မှန်မည်။ သို့သော် သင့်ဘက်မှာလုပ်ထားသော အမှားအတွက် သင်၌ တာဝန်ရှိဆဲဖြစ်သည်။ သင်သာ သင့်ဘက်မှ အမှားကို တောင်းပန်ပါက ထိုသူကလည်း သူ့ဘက်မှအမှား များအား တောင်းပန်သည်ကို သင် သိရှိလာလိမ့်မည်။ သင်တို့ထဲမှ တစ်ဦးဦးမှ ပထမဆုံး ခြေလှမ်းကို စလှမ်း ရမည်။ စလှမ်းသူမှာ သင့်ဘာကြောင့် မဖြစ်ရ မည်နည်း?
သေးချင်သေးပေလိမ့်မည်။ သို့သော် သခင်ကသာသင့်စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဤအရာကို မှတ်မိသတိရ စေပါက သင် ဤအရာကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရမည်။ အခြားလူကလည်း ထိုအရာကို ရှင်းလင်းစွာမှတ်မိ သတိရလျက်ရှိနေသည်ကို သင်သိလာလိမ့်မည်။
သူနားလည်လား၊ မနားလည်လား ဆိုသည်မှာ အဓိကအချက်မဟုတ်ပါ။ အဓိကအချက်မှာ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ စကားကို နာခံရန် သူပြောသည့်အတိုင်း လုပ်ရမည်။
““သူသည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကို မည်သို့သူထင်မြင်မည်နည်း?
နောက်ဆုံး၌သူသည် မိမိမှားသည်ကို ၀န်ခံရဲပြီး တောင်းပန်စကားဆိုရဲလောက်အောင် ရိုးသားမှုနှင့် နှိမ့်ချမှု အလုံ အလောက် ရှိသည့် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ကို တွေ့ရှိပြီးဟု သူထင်ချင်ထင်လိမ့်မည်။ အခြားပုံစံတစ်မျိုး အားဖြင့်လည်း သူတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ သူ၏တုံ့ပြန်မှုနှင့် ထင်မြင်မှုက မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည် သခင်ကို နာခံရမည်။ ယခု ဘုရားသခင်ကို နာခံပါ။
ယခုတွင် ရှင်းလင်းကြည်လင်သော သြတ္တပ္ပစိတ်ကို ရရှိရန်အတွက် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သင်သိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရန်မှာ သာ၍အရေးကြီးသည်။ ကျမ်းစာက ““ဤအရာများကို သင်တို့ သိသည်အတိုင်း ကျင့်လျှင် မင်္ဂလာရှိကြ၏။””ဟုဆိုသည်။ ယော ၁၃း၁၇
အခြားသူများနှင့် သင့်မြတ်စေရန်အတွက် ယခုပင်စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ သင်အများဆုံး အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သောသူများ ထံသို့ သင် အရင်ဆုံး သွားရန်မှာ အရေးကြီးသည်။ သင့်စာရင်းမှ နံပါတ်-၁ အားဖြင့် စတင်ပါ။ သူထံသို့သွား၍ သင့်ကို အပြစ် လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါ။ ထို့နောက် နံပါတ်-၂ ထံသို့ ဆက်သွားပြီး သင့်စာရင်း၏အောက်ခြေရှိလူများထံသို့လည်း သွားပါ။
သင်သည် ဘုရားသခင်ထံ၌ သင့်အပြစ်များကို သစ္စာရှိစွာ ၀န်ခံတောင်းပန်၍ အခြားသူများအပေါ်တွင် ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပြီးချိန်တွင်၊ ကြီးမားသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးတစ်ခုကို သင်အောက်သို့ချလိုက်နိုင်ကြောင်း ကို သင်သိရှိလာလိမ့်မည်။ ထိုမျှမက သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့နှင့် သင့်မြတ်ခြင်းအားဖြင့် အတွင်းပိုင်း စိတ် ၀ိညာဉ်၏ လွတ်မြောက်မှု့ကို သင်ရရှိသည်ကို သိရှိလာလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့နှင့် သင့်မြတ်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်းလင်းကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ကို ရရှိသည်။
(က) သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် သင့်မြတ်ကြောင်းကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) သင်သည် လူတို့နှင့်သင့်မြတ်ကြောင်းကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။
(ဂ) သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့နှင့်သင့်မြတ်ကြောင်းကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။
(၂) အောက်ပါအချက်များသည် မှန်လား/မှားလား?
- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဘ၀တူလူများအပေါ်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်သောအခါ၊ ဘုရားသခင် အပေါ် တွင်လည်း အပြစ်ကျူးလွန်သည်။
- ဘုရားသခင်နှင့် မသင့်မြတ်မီ၊ ပထမဆုံးလူများနှင့် အရင်သင့်မြတ်ရမည်။
မှန်/မှား (မေးခွန်း ၃-၅)
(၃) မှန်ကန်စွာတောင်းပန်နိုင်ရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ““ငါမှားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင်လည်း မှားခဲ့တာပဲ”” ဟု ပြောရမည်။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်ကို လုံးဝဥဿုန်ဝန်ခံပြီး အပြစ်လွှတ်ပေးရန်အတွက် နှိမ့်ချစွာတောင်း ဆိုရမည်။
(က) မှန် (ခ) မှား
(၅) ““ငါအမှားလုပ်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင် ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ””ဟု ပြောခြင်းသည် မှန်ကန်သောတောင်းပန်မှုမျိုး ဖြစ်သည်။
(၆) မှန်ကန်သောပုံစံမျိုးဖြင့် မည်သို့တောင်းပန်ရမည်နည်း?
(က) ““ငါမှားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းလည်းမှားခဲ့တာပဲ””
(ခ) ““မင်းကိုလိမ်ခဲ့မိတာ ငါ့အမှားပါ။ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးမလား?
(ဂ) ““ငါဒေါသတကြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီလိုဖြစ်အောင် မင်းကဖြစ်စေခဲ့တာကိုး””
(၇) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစုံတဦးကို နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေခဲ့ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် .....
(ခ) သင်လျော်သောအဖိုးအခကို ပြန်လျော်ပေးရမည်။
(၈) ပြန်လျော်ပေးသည် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
(က) တောင်းပန်စကားဆိုပြီးနောက် အိမ်ပြန်အနားယူခြင်းဖြစ်သည်။
(ခ) ထိုသူ၏ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့မှုအတွက် သင့်လျော်သောအဖိုးကို ပြန်လျော်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
(၉) သင်အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သောသူနှင့် သင့်ကြားတွင် အခြေအနေတို့သည် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါက၊ သင်သည် အပြစ်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
(၁၀) အကယ်၍ အခြားလူသည် သင့်ထက်ပိုမှားလျှင်တောင်မှ သင့်ဘက်မှလုပ်ခဲ့သောအမှားကို ချေဖျက်ဖို့ ရန်အတွက် သူ့ဆီသို့ သွားရောက် တောင်းပန်ရမည်။